मूर्तिकार बाबुछोरा Ukeraa – Latest and featured news from Nepal.
एकजना मूर्तिकार बाबाले आफ्नो छोरालाई पनि मूर्ति बनाउँन सिकाउँथे । उनीहरुले मूर्ति बनाएर सहरमा बेच्न लैजान्थे । सुरुमा त बाबाको मात्र मूर्ति विक्री हुन्थ्यो । छोराको मूर्ति विक्री नै हुँदैनथ्यो । बाबाले आफ्नो मूर्तिलाई एक हजार रुपैयाँमा बेच्ने गर्थे ।
छोराले मूर्ति बनाउँन सिक्दै गयो । बाबाले पनि सिकाउँदै गए । केहि वर्षमा छोराले बनाएका मूर्ति पनि बजारमा विक्री हुन थाले । तर बाबाको मूति एक हजार रुपैयाँमा विक्रि हुन्थ्यो भने छोराको मूर्तिहरुले मुश्किलले २०० रुपैयाँ पाउँथे ।
घर आएपछि बाबाले छोरालाई मुर्ति बनाउँदा भएका गल्तीहरु औल्याईदिन्थ्यो । छोराले पनि अर्कोपटक मूर्ति बनाउँदा त्यो गल्ती सच्च्याउँथ्यो र बजारमा बेच्न लैजाँदा अलिक बढि मूल्य पाउँथ्यो ।
गुण र रुप
बिस्तारै छोराका मूर्तिहरु पनि ५०० रुपैयाँसम्ममा विक्रि हुन थाले । तर छोरा अझै खुशि थिएन । बाबाले पनि छोराले बनाएको मूर्तिमा गल्तीहरु देखाईरहन्थ्यो । त्यसलाई सच्च्याउँन भन्थ्यो । छोराले पनि त्यो कुरा मानेर अर्कोपटकमा गल्ती सुधार्दै मूर्ति बनाउँथ्यो । त्यो मूर्तिले बिस्तारै ७०० रुपैयाँ पाउँन थाल्यो । त्यसपछि पनि बाबो गल्ति देखाई नै रहन्थे अनि छोराले गल्ती सच्याउँदै मूर्ति बनाउँथ्यो र त्यो मूर्तिले अझ राम्रो मूल्य पाउँथ्यो ।
हुँदा हुँदा एकदिन त यस्तो पनि आयो छोराको मूर्ति बाबाको मूर्तिभन्दा बढिमा विक्रि हुन थाल्यो । तर पनि बाबाले छोराको मूर्तिमा केही न केही गल्ती देखाएर त्यसलाई सुधार्ने सुझाव भने दिन छाडेन । एकदिन त छोरालाई पनि निकै रीस उठ्यो र बाबालाई
" मेरो मूर्ति तपाईंको भन्दा महँगोमा विक्री हुन्छ अब मलाई तपाईंले सिकाउनु पर्दैन" भनेर जवाफ फर्काईहाल्यो ।
छोराको यो जवाफ सुनेर बाबा एकपटक मुसुक्क हाँस्दै छोरालाई हेर्दै भन्यो ।
"छोरा जब म तिमीजत्रै थिएँ त्यो बेला ममा यस्तैगरि आफ्नो कलाप्रति घमण्ड जागेको थिएँ । मेरो मूर्तिलाई त्यो बेला नै मान्छेहरुले एकहजारमा किन्थे । त्यसैले मलाई लाग्न थाल्यो म नै सर्वश्रेष्ठ हुँ र मेरो कलामा कहिल्यै खोट हुँदैन । थाहा छ त्यसपछि मैले ज्यादा सिक्न छोडेँ । तर त्योबेलादेखि आजसम्म मेरो मूर्तिले एकहजारभन्दा बढि मूल्य कहिल्यै पाएन । अब तिमी पनि यसरी आफ्नो कलामा कसैको सुझावलाई स्वीकार्न सक्दैनौं र आफैलाई सर्वश्रेष्ठ ठान्छौ र सिक्न छाड्छौ भने तिम्रो प्रगति पनि यहीँ रोकिन्छ ।"
बाबाको यो कुरा सुनेर छोराको शीर लाजले झुक्यो र अबदेखि कहिल्यै घमण्ड नगर्ने अनि अरुको सुझावलाई मनन् गर्ने बाचा गर्यो । बाबाले पछि खुशी हुँदै छोरालाई अंगालोमा लिए ।
२०७८ असार ०६ गते १६:१० मा प्रकाशित
बाल चित्र कथा 'एमिली र त्यो चिज' र 'एमिलीको खरायो' नेपालीमा
२०७८ मंसिर ०८ गते १६:४१ मा प्रकाशित
कथालय इन्कले दुवै चित्रकथालाई नेपाली भाषामा प्रकाशित गरेको हो। यी चित्र पुस्तकहरूको नेपाली अनुवाद भिक्टर प्रधानले गरेका छन्। यी बाल पुस्तकलाई होड्डर र स्टोङ्टन् (....
सुशीलाको पुस्तक 'पानीमा रुझ्नु हुँदैन' प्रकाशित
२०७८ कात्तिक ३० गते १९:३० मा प्रकाशित
चित्र कथाले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवारमा जन्मेर हुर्केका बालबालिकाको सोचाई, बुझाई र व्यवहार कति पृथक् हुन सक्छ भन्ने कुरालाई इङ्गित गरिएको छ। 'पानीमा रुझ्नु हुँदैन' शीर्षक....
Dashain Then Vs Now
२०७८ कात्तिक १४ गते २१:२६ मा प्रकाशित
In the course of time, The way of celebrating dashain has altered. Before Dashain meant flying kites,family gatherings,eating meats,visiting relative and lots more but now....
बालकथा सङ्ग्रह ‘पोलेको मकै’ बजारमा
२०७८ असोज २९ गते २१:३५ मा प्रकाशित
२०७२ सालयता काठमाडौंमा बसेर साहित्य र पत्रकारितामा संलग्न राईका बालकथा सङ्ग्रहमा ‘बलजितको जुक्ति, मुनाको अभियान, सुम्निमाको भ्रमण, पोलेको मकै, फूल नफुलून्, चरी उडून्, पारुको पढाइ’....
२०७८ साउन ०८ गते ९:४४ मा प्रकाशित
आफुलाई निकै माया गर्ने पुजारीको गरिबी देख्दा गोरुलाई पनि निकै दया लाग्थ्यो । केहि गरी पुजारीलाई सहयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर उसले सोचिरहन्थ्यो । एकदिन....